युवा अवस्थामा नै कम्मर दुखेर हैरान हुनुहुन्छ भने यस्तो कुरामा सधै ख्याल गर्नु पर्छ, नत्र पछुताउनु पर्ला – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / युवा अवस्थामा नै कम्मर दुखेर हैरान हुनुहुन्छ भने यस्तो कुरामा सधै ख्याल गर्नु पर्छ, नत्र पछुताउनु पर्ला
admin May 21, 2022 स्वास्थ्य Leaveacomment 152 Views
युवा अवस्थामा नै कम्मर दुखेर हैरान हुनुहुन्छ भने यस्तो कुरामा सधै ख्याल गर्नु पर्छ, नत्र पछुताउनु पर्ला !
बुढ्यौलीले च्याप्दै गएपछि हात/खुट्टा गल्न थाल्छ । जोर्नीमा दु-ख्न थाल्छ । शरीर अ`र`रो हुन्छ । भनौं, शरीरको लचिलोपन कम हुन्छ र मांशपेसी, हड्डी, जोर्नीमा दु`खाई अनुभव हुन थाल्छ। अझ जाडो महिनामा त खपिनसक्नु हुन्छ । सामान्या दिनचर्यामै असर पुग्ने गर्दछ ।
यी भए बुढ्यौलीको कुरा । तर, युवा उमेरमै यस्तो समस्या भएमा के होला युवाअवस्थामा शरीर दुख्नुका थुप्रै कारण छन् र, दु`खाईका प्रकृति पनि फरक फरक हुन्छन् । शरीर दु`ख्नुको पछाडि सामान्यदेखि गम्भीरसम्मका हुन्छन् । पछिल्लो समय शरिर दुख्ने समस्या भोगका युवाको संख्या पनि ठूलो छ । निम्न छन् शरिर दुख्नुका मुख्य कारणहरु:-
१) शरीर दुखिरहेको छ भने तपाईलाई बा-थको समस्या पनि हुन सक्छ । रगतमा हेमोग्लोविनको कमी भएमा पनि शरीर दुख्ने समस्या हुन जान्छ । यसले ए`निमि`या नै बनाउने ख`तरा वढ्ने गर्छ । शरीर दुख्ने अर्को कारण भनेको डिहाइजेशन हो ।
२) तपाईको शरिर दु`खिरहेको छ र रुघाखोकी पनि लागिरहेको छ भने त्यति धेरै आत्तिनु पर्दैन । किनकी रुघाखोकीको कारण पनि शरीर दुख्ने गर्छ । शरीरमामा भिटामिन डीको कमी हुँदा पनि शरिर दुख्ने समस्याले सताउँछ ।
३) थाइराइडको कारण पनि दुख्ने गर्छ शरीर । तपाई कतिको त-नाव हुनुहुन्छ भन्ने कुराले पनि शरिरको दुखाईमा भूमिका खेल्छ । मानिस बढी स्ट्रे* समा छ भने पनि शरिर दु`खिरहन्छ ।
४) सुताईको पो* जिशन मिलेन या निद्रा नपुगेमा, पानीको मात्रा कम भएमा शरीर दुख्ने समस्याबाट ग्रसित हुन सकिन्छ । स्वास्थ्यमा भएका विभिन्न संक्रमणको कारणल पनि शरीर दुख्ने गर्छ।
शरीर दु`खाइका जटिलता:- शरीर दु` खेको छ भने शरिरका अन्य लक्षणहरुलाई ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । शरीरमा कुनै संक्रमण या रुघा-खोकीको समस्या छैन भने थाइराइड, भिटामिन सी, बा-थ, रगतको मात्रा लगायतका जाँच गर्नुपर्छ।
यसलाई हेलक्राई गरेको अवस्थामा शरीरका अन्य अंगलाई असर पुर्याउन जान्छ । बा-थको समस्या छ र समयमै त्यसको उपचार नगरेको अवस्थामा मुटुमा समस्यापर्न जान्छ । यदि युरिक ए-सिडको समस्याले हो भने मिर्गौलालाई क्ष* ति पुर्याउदै जान्छ । यस्तो समस्या बढेर मिर्गौला फे* लको अवस्थामा पुग्छ ।
थाइराइड ग्रन्थीमा असर परेको छ भने यसले शरिरको सम्पूर्ण मेटोबो-लिज्मलाई असन्तुलित गराइदिन्छ । त्यसैले, यो आफैमा त्यति ठूलो समस्या भएता पनि सामान्य रुपमा भने लिनु हुँदैन । दिर्घकालिन रुपमा यसले स्वास्थ्यमा निकै ठूलो असर पुर्याउछ ।
हाम्राे न्युजहरु हजुरहरुलाई कस्ताे लाग्छ सल्लाह सुझाव को लागि हामिलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ।। तपाइको एक सेयरले थाहा नपाएकाले जानकारी पाउनेछन भने हामीलाई पनि सहयोग पुग्नेछ
Previous यस कारण बुहारीहरु बुधवार घर जानु हुँदैन ?
Next जेठ ८ गते आइतबारदेखि १४ गतेसम्म को राशिफल हेर्नुहोस्